Mashandisiro ekushandisa iyo yekutsvaga yemifananidzo pane iyo iPhone | IPhone nhau
Uye ndezvekuti kwenguva yakati kuti isu tinenge tichishingairira yekutsvaga injini mu Mifananidzo app pa iPhone, iPad, iPod kana chero Apple chishandiso kunyangwe Mac yedu.Nhasi tichaona kuti tingawana sei pikicha imwe pakati pevazhinji vauinayo mu iPhone gallery.
Zvinogona kutaridzika kunge zvakaoma asi zviri nyore kwazvo kuita uye ndeyekuti Apple inoita kuti vashandisi vawane zvivakwa zvakawanda kuti vawane pikicha iyo yauri kutsvaga uye yausina mune imwe albha. Iyi sarudzo iri nyore kushandisa uye ichatitungamira kumafoto atiri kutsvaga pane yedu reel.
Iyo kambani pachayo inoita kuti zvive nyore kwatiri nevhidhiyo iyi yavakatumira pane yavo yepamutemo YouTube chiteshi, saka isu tinongofanirwa kudaro tevera matanho anoratidzwa uye wagadzirira:
Zviri nyore chaizvo kushandisa yekutsvaga injini yekutsvaga kuti uwane iwo mufananidzo. Tinogona kushandisa chero chinhu kuti tiwane, kubva kuzita remunhu chairo (sekureba sekunge isu takavaziva kare) kuburikidza nechimwe chinhu kana kunyangwe nzvimbo yakaita sebhawa, mahombekombe, mamwe masitepisi, guta, nezvimwe ... Chinhu chinonakidza nezve iri basa ndechekuti zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kuwana chero mufananidzo pane yedu iPhone uye unoibvumira kuti inyatsoita basa kana tine reel yechigadzirwa chedu chizere nemifananidzo. Zano iro vazhinji vanotoziva kare asi iro rinogona kubatsira kune vanhu vazhinji vangotenga iyo iPhone, iyo iPad kana chero Apple chishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa iyo yekutsvaga yemifananidzo pane iyo iPhone
Apple Music inotangisa iyo nyowani Shazam Discovery playlist, runyorwa rwevanonyanya kuteerera vhiki rega rega